Version 0.3.2 – Ụfọdụ obere fixes
August 3, 2009 site na rịọ 14 Comments
Nke a version-abịa idozi ụfọdụ obere okwu na zukọtara ka anyị na-arụ ọrụ na ụfọdụ ndị ọzọ isi arụmọrụ. Isi fix bụ onye na-enye ohere ojiji nke a isi static page nke mere mbipụta na n'oge gara aga. A nta nke banyere ụfọdụ oghere peeji nke na-ofu. Ọ bụrụ na ị na-ezute na-acha ọcha na peeji nke, dị nnọọ kpọtụrụ anyị ma ọ bụ ebe a na anyị ga-eme ka ọ na-arụ ọrụ (ọ dịghị php4 biko…).
Ga-amasị anyị na-ekele Anthony maka enyemaka ya akuko na debugging ndị okwu ndị dị ka nke ọma dị ka ya maka enyemaka na saịtị a nsụgharị Russian.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: bugfix, nyere translation, obere, tọhapụ, WordPress ngwa mgbakwunye
August 4, 2009 na 11:31 na
August 4, 2009 na 7:45 obi
N'ihi a otutu maka update. It is really a great plugin 🙂
Tomas Kapler na-ekwu,
August 7, 2009 na 3:37 obi
gị plugin bụ naanị otu, nke m ike nweta nkwalite automaticaly. Ọ ususal, ma ọ bụ m na naanị otu?
August 8, 2009 na 12:14 na
Amaghị m, mgbe gbalịrị na… ọ dịghị ihe mere ya agaghị.
Ị ga-esi ọ bụla njehie ozi?
August 7, 2009 na 11:39 obi
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma!
The ngwa ngwa na mma akpaghị aka nsụgharị m mgbe eji (na hụrụ)
August 8, 2009 na 12:13 na
August 13, 2009 na 6:25 obi
M na-agbalị ime ka a ozi ọma Site na 3 asụsụ dị iche iche na gị Transposh plugin yiri ka ihe kasị mma maka a na oru ngo.
Nsogbu m nwere bụ na Asụgharịa bọtịnụ ka na-arụ ọrụ. Gịnị yould a na- ? Ule Site: http://www.brinvest.ch/wp/
August 14, 2009 na 12:33 na
Ọ DỊ MMA, seems that the Theme is blocking the Edit function 🙁
Ị pụrụ inyere iji chọpụta ihe kpọmkwem blocks Dezie ọrụ ? The isiokwu m iji na http://www.brinvest.ch/wp/ bụ http://www.wp-themes.der-prinz.com/magazine/
August 17, 2009 na 12:55 na
Ị ga-ike a ọrụ iji a ọzọ wijetị n'ihi na m nwere 2 sidebars na ike na-eji naanị 1 wijetị plugin ;(, thx maka oké plugin!!!
August 23, 2009 na 11:09 obi
Akwa ngwa mgbakwunye! Ma ọ bụ n'ezie a * smart * plugin! 🙂
M na gwa a obere isiokwu na http://www.myatus.co.uk/2009/08/23/fancy-wordpress-translations na-esi eme ka ụfọdụ obere mgbanwe ka a WP isiokwu na-eme ka ọ na-a obere ihe onye ọrụ enyi na enyi / obere ohere na-ewe — ikekwe nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị onye.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na m nwere ike, Ga-amasị m na-atụ aro ihe ọzọ nhọrọ na plugin ha. Ọfọn, abụọ n'ezie:
M maara nke “no_translate” klas (na m ugbu a iji na). Ma, ọ pụrụ ịdị mfe ka mmadụ nwere edit ubi ke ha, ebe ị pụrụ nanị tinye klas aha (n'ụdị “.classname”) ma ọ bụ NJ (n'ụdị “#ID”). Ọ ga-abụ a ohere / rikoma iche ndepụta ma ọ bụ ihe fancier…
On ahụ dee, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na i nwere ike ewepu ụfọdụ ọcha, ntụgharị., adịghị ịsụgharị ihe ọ bụla na nke ahụ bụ n'etiti “” mkpado. Ihe mere nke a, dị ka ị hụrụ na m na saịtị, na-na isi iyi koodu enclosed na or also gets translated. It's rather silly to have a "if then else" statement become "misschien dan anders" (in Dutch). The same goes for right-aligned text, ie Hebrew or Arabic.
September 4, 2009 na 11:23 obi
M na-eji na-Global Translator Plugin site Nothing2Hide ma kwụsịrị iji ya mgbe m chọpụtara na m Google Akaụntụ / Webmaster Ngwaọrụ na ọ na-eke narị otu narị na otu narị otu narị 404 Error peeji nke. Gị ga plugin ike 404 Error peeji nke dị ka ndị ọzọ sụgharịrị plugin? Ọ bụrụ na, mgbe ahụ, m chọrọ na-amalite iji ya na-!
September 8, 2009 na 10:26 na
M dee ikwu ọhụrụ version nnọọ na-egosi ya. M chọrọ ịgwa ya nwere ahụhụ n'ime. Canot iji na Wordtube Plugin ( ọ dịghị ihe Playlist ) na-dakọtara na and Galery ( ọ dịghị ihe Diashow ).
M na-atụ gị nwere ike idozi ya, ya a oké plugin !!
September 13, 2009 na 8:24 na
nwere ike ị na-ezo m ka m a na saịtị ahụ na nsogbu n'ihi ya, m ga-enwe ike iji lee anya?
Myatu si na-ekwu,:
August 23, 2009 na 8:28 obi
I wanted to make sure that I was not leaving out a potential international audience. Dị ka ihe atụ, one of the forums I frequent a lot belongs to a French company.